Piriimer Liigii Ingiliz keessatti maaltuu odeeffamaa jiraa? - BBC News Afaan Oromoo
Chelsii: Leenjisaan Chelsii Maawuriizoo Sarrii akka Chalsii turuuf waamicha dhumaa dhiyaateef diduu isaatiin walqabatee Firaank Laampaarditu leenjisaa kilaba kanaa ta'a jedhamaa jira.
Laampard ofii isaa ammoo jaalleewwan isaa keessaa akka gargaaraa Chelsiitti akka turu kan barbaadu Diidi'eer Diroogbaadha. Joon Teeriin akka turu garuu Laampaard hin barbaadu .
Taphataan sarara gidduu Chelsii umuriin isa ganna 30 ta'e Wiliyaan ammoo Chelsii keessa waggaa lamaaf walii galtee isa tursiisu mallatteessuu jala ga'eera jedhame.
Nayimaar dubartii gudeeduun himatame
Jijjiirraa taphattootaa eenyuun gara kilaba kamii geessa laata?
Maanchester Yunaayitid: Taphataan lammii Fraans, Maanchester Yunaayitidiif taphatu Pool Pogbaa gara Riyaal Maadiriid akka deemuu barbaadu dubbachaa jira.
Xabataan Kiristaal Palaas garee warra umuriin isaanii 21 gadii ta'e Aroon Waan-Bissaakaa gara Maanchester Yunaayitid dhufuu akka jaallatu himama garuu gareen isaa akka isa gadi dhiisu dhiibbaa irratti gochaa hin jiru.
Maanchester Yunaayitid taphataa lammii Ingilaand sarara ittisaa Leesteriif taphatu Harii Maagu'iree fudhachuu danda'a jedhamaa jira. Sababiin xabataan umuriin isaa ganna 26 kun carraan isaa gara Yunaayitid ta'a jedhameef, Maachester Siitiin jijjiirraa isaatiif Paawondii miliyoona 80 kaffaluudhaf waan duubatti jechaa jiruufidha.
Maanchester Yunaayitid Daaviid dee hiyaatiin tursiifachuuf yaadaa jira. Taphataa karra eegu umuriin isaa ganna 28 keessa jiru kana hanga 2020'tti tursiisuuf kaffaltii foyyaa'aa kennuufiif akka jiran ibsaa jiru.
Maanchester Yunaayitid taphataa lammii Arjentiinaa umurii waggaa 23 Joovaaniin Loo Celsoo mallatteesisiifachuu barbaada. Riyaal Beetis ammoo Paawondii miliyoona 67 dhiyeessuudhaan gaafachaa jira. Maqaan taphataa kanaa Tootinhaam waliinis ka'aa jira.
Totinhaam: Taphataa sarara gidduu Ispoorting Lisben Biruunoo Fernaandeez fudhachuuf yaalaa jira. Taphataan umuriin isaa ganna 24 ta'e kun duraan maqaan isaa Maanchester Yunaayitid waliin ka'aa ture.
Image copyright Etsuo Hara
Arsenaal: Taphataa isaa lammii Jarman ta'eefi umuriin isaa 30 guute Mesuut Ooziliin gurguruu barbaada. Kan Arsenaal taphataa kana gurguruu barbaades jijjiirraa taphattootaa ganna kanaaf taasisuuf maallaqa dabalataa barbaadeeti.
Taphataan sarara duraa kun yeroo ammaa waggaa 29 keessa kan jiru yoo ta'u, Suupper Liigii Chaayinaa keessatti barbaadamaa jira.
Arsenaal taphataa lammii Morookoo Haakiim Ziyaachiin Paawondii miliyoona 30'n Ayaaksi dorgomaa jirus fedhii fudhachuu agarsiisaa jira.
Taphataan umurii 26 keessa jiru kun Liiverpuuliinis barbaadamaa jira.
Liiverpuul: Liiverpuul taphataa lammii Iyivorii Kosti Nikkoolaas Peeppeef gatii jijjiirraa dhiyeesseera jedhama.
Nikkoolaas Peeppee umuriin isaa waggaa 24 yommuu ta'u Liilleef taphata.
Yoo Peeppeen gara Liiverpuul kan dhufu ta'e, laanjisaan kilabicha Jergen Kloop taphataa lammii Ijiptii Mohaammed Saalhaatiin gurguruu danda'a jedhameera.
Moo Saalaan yeroo ammaa umuriin isaa waggaa 27.
Liiverpuuliin sarara ittisaarra kan taphatu lammiin Kirooshiyaa Dejaan Lovreen gara kilaba Xaaliyaan AC Miilaan deemuu danda'a jedhamaa jira.
Karaa biraan Arsenaal taphataa lammii Gaaboon Piyeeree Emiriikee Awubaameeyaangiin tursiisuuf waliigaltee haaraa malletteessuuf mariirra jira.
Maanchester Siitii: Taphataan sarara ittisaa lammii Ingilaan Keyiil Wooker Siitii waliin waliigaltee haaraa waggaa lamaafi tursiisu mallatteessuuf jira.